चुप लाग्न नसक्दा « नेपाली मुटु
Archive for the ‘चुप लाग्न नसक्दा’ Category
आज एकिकृत ने.क.पा.(माओबादी)को आमहडतालको पाँचौ दिन । हिजो सम्म आन्दोलनमा जुन शान्ति थियो त्यो अब धेरै हदसम्म बद्लिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा हडतालको ‘प्रतिरोध र प्रतिकार’ भन्दै झडपको सृजना गरिएकोे छ । यसबाट घाइतेको संख्या र जनमानसमा आक्रोस बढ्न थालेको छ । र, भर्खरै ए.माओबादीको स्थायी समितीको बैठक सकिएको छ । यो बैठकको निर्णयले अझ सन्त्रास थपेको छ । लौ ! अब के हुने हो भन्ने डरले नागरिकको मन ढक्क फुलेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकार पक्षिय दलहरु आफ्ना युवा संगठनलाई ‘प्रतिकार’का लागि उक्साइरहेका छन् । यसले पक्कै पनि नेपाली मनको शान्तिको चाहनालाई साकार पार्न सक्दैन । माओबादीको प्रतिकारको बिरुद्धमा डटेर लड्ने उदघोसले नेपालको आकाशमा भयको कालो बादल अझ घनिभुत भएको छ । यसलाई रोक्न कुनै पहल नगर्नु सरकारको शुन्यता र सत्तारूढ़ दलको अशफलता बाहेक केहि होइन । Continue Reading आन्दोलनको प्रतिकारले देखाएको संकेत >>
“संसदमा हाम्रो सबै भन्दा ठुलो संख्या छ । अहिलेका सबै राष्ट्रिय एजेण्डाहरु हाम्रै बलमा स्थापित भएका छन् । हाम्रो माग सर्वमान्य छ, तर हामी चै अमान्य । यो हाम्रो अपमान हो । हामी जस्ता कथित तल्लो बर्गका मानिसहरुले कुनै राष्ट्रिय एजेण्डा ल्याउँन सक्दैनन् भनेर यिनीहरु पुष्टि गर्न खोज्दैछन् । हामी कदापी यो हुन दिने छैनौं । त्यसकारण यो अन्तिम युद्ध यो कारण पनि हो कि हामी यही आन्दोलनबाट हाम्रो शक्ति देखाउँन चाहन्छौ, परिवर्तन चप्पल लगाउँने र खाली खुट्टा हिड्नेबाट पनि सम्भव छ भनेर प्रमाण दिन चाहन्छौ, हाम्रा समस्याहरु काठमाण्डौलाई देखाउँन चाहन्छौं ।” रातो सर्टमा सजिएका एक आन्दोलनकारीले कुनै बरिष्ट नेताले बोल्ने शैलीमा भने । “राष्ट्रिय सहमतिका लागि हामी सडकमा छौं, सरकार हाम्रो विरुद्धमा सेना लगाउँने ध्वाँस दिन्छ भने यो जस्तो अलोकतान्त्रिक सरकार कहाँ छ ? के राष्ट्रिय सरकार अहिलेको आवश्यकता होइन ? संसदमा भोटिङ गरेर सहमतीको राष्ट्रिय सरकार बन्छ ? यसैले यो अलोकतान्त्रिक सरकारलाई नहटाइ हामी गल्दैनौं ।” उनले अझै थपे । उनले यसो भनिरहदा छेउमा रहेका प्रहरीहरु उनी तिर एकोहोरो हेरिरहेका थिए । उपस्थित भिडको संख्याले उनको जोस बढिरहेको थियो । Continue Reading अब आतकंकारी भन्न मात्र बाँकी छ >>